Wariyihii Ruushka ee la sheegay in lagu diley Kiev oo la arkay isaga oo nool - BBC News Somali
Wariyihii Ruushka ee la sheegay in lagu diley Kiev oo la arkay isaga oo nool
QM iyo Dawladda Soomaaliya oo Liibiya ka soo celiyay 150 qaxooti ah
Soomaaliya oo saddex nin ku xukuntay dil
Ugu yaraan 33 ruux oo lagu dilay Eritrea
Posted at 16:06 30 May 201816:06 30 May 2018
Waxaa intaasi nagaga dhan tabinteenii tooska ahay ee maanta,waad ku mahadsan tihiin la socoshadiina
Halkan kaga bogo wararkii ugu waawaynaa maanta oo Arbaco ah, waxaana ka mid ah.
LinkSu'aal laga keenay ninkii dhalashada Faransiiska lagu siiyay cunug uu badbaadiyay
Maxay tahay sababta dowladda Turmenistan ay u baarayso musqulaha?
Posted at 15:02 30 May 201815:02 30 May 2018
Wariyihii Ruushka ee la sheegay in lagu dilay magaalada Kiev ayaa kasoo muuqday taleefishin isaga oo nool, islamarkaasna bad qaba.
Mr Babchenko ayaa ka soo muuqday shir jaraa'id oo uu ku qabtay dalka Ukrainian.
Madaxa sirdoonka dalka Ukraine Vasyl Hrytsak, ayaa ka sheegay shirkaasi jaraa'id in dilka uu ahaa mid la jilayay si loo ogaado shirqoolada sirdoonka Ruushka.
Xaaska Mr Babchenko ayaa horey u sheegtay in ninkeeda dhabarka laga toogtay.
Saxafigan horey uguma sheegin xaaskiisa in dilkani uu yahay mid jilliin ah "gaar ahaan waxaan raali galinayaa xaaskeyda," ayuu yiri.
Arkady Babchenko ayaa la arkayay isaga oo gadaal ka muuqda markii la qabanayay shirka jaraa'idImage caption: Arkady Babchenko ayaa la arkayay isaga oo gadaal ka muuqda markii la qabanayay shirka jaraa'id
Posted at 12:40 30 May 201812:40 30 May 2018
Daawo:Maku dul socon kartaa xarig adigoo meel qabsanin dhulkana uu kuu jiro 1,300 mitir.
Buurlayda gobolka Zhangjiajie ee dalka Shiinaha ayaa waxaa ka jira tartan cajiib ah oo xarigga lagu dul socdo.xariga ayaa ah mid si aad ah u dhuuban.
Video caption: Maku dul socon kartaa xarig adigoo meel qabsanin dhulkana uu kuu jiro 1,300 mitir.Maku dul socon kartaa xarig adigoo meel qabsanin dhulkana uu kuu jiro 1,300 mitir.
Posted at 12:23 30 May 201812:23 30 May 2018
Farmaajo oo Nairobi u jooga wadahadalo dhanka amniga
Madaxwayne FarmaajoImage caption: Madaxwayne Farmaajo
Madaxwaynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulahi Farmaajo ayaa soo gaaray magaalada Nairobi oo ay uga bilaabanayso booqasho qaadan doonta laba maalmood.
Sida lagu xusay qoraal barta tweetarka ee madaxtooyada Soomaaliya, Madaxwayne Farmaajo iyo madaxda Kenya ayaa ka wada hadli doona sidii loo sii xoojin lahaa xiriirka laba geesoodka ah iyo wada shaqaynta dhanka ammaanka.
Waxa ay sidoo kale ka wadahadli doonaan xiriirka dhanka ganacsiga iyo dublamaasiyada.
Kenya foreign ministryCopyright: Kenya foreign ministry
Madaxwayne Farmaajo iyo wasiirada arrimaha dibadda KenyaImage caption: Madaxwayne Farmaajo iyo wasiirada arrimaha dibadda Kenya
Posted at 12:12 30 May 201812:12 30 May 2018
Posted at 11:48 30 May 201811:48 30 May 2018
Wiil dhallinyara ah oo tix gabay ah ku cabbiraya rafaadka tahriibka
In ka badan 150 tarhriibiayaal Soomaali ah oo ku xayirnaa Liibiya ayaa maanta Muqdisho dib loogu celiyay
Video caption: Wiil dhallinyara ah oo tix gabay ka tiriyay rafaadka tahriibkaWiil dhallinyara ah oo tix gabay ka tiriyay rafaadka tahriibka
Posted at 11:29 30 May 201811:29 30 May 2018
Posted at 11:09 30 May 201811:09 30 May 2018
Donold TrumpImage caption: Donold Trump
Posted at 11:05 30 May 201811:05 30 May 2018
Posted at 10:01 30 May 201810:01 30 May 2018
In ka badan 150 qof oo muhaajiriin Soomaali ah oo ku xayirnaa gudaha dalka Liibiya ayaa maanta dib loogu celiyay magaalada Muqdisho.
Dadka maanta Muqdisho dib ugu soo laabtay waxay isugu jiraan, carruur, haween, dad da' ah iyo dhallinyaro intaba, diif ayaana ka muuqanaysay.
Dowladda Soomaaliya oo gacan ka helaysa Hay'adda Caalamiga ah ee Sodcaalka ayey u suuragashay inay dalka dib ugu soo celiso boqolaal qof oo ka mid ah Soomaalida ku go'doomay dalka Liibiya, kuwaas oo qaar ka mid ah sidii adoontii la kala iibsaday.
Idaacddeenna duhurnimo ayaad kaga bogan doontaan xogtan oo intaas ka sii faahfaahsan.
Posted at 9:15 30 May 20189:15 30 May 2018
Dowladda Maraykanka oo ka jawaabtay su’aal la yaab leh oo uga timid muwaadin
Laanta la socodka hab dhismeedka dhulka ee Maraykanka ee lagu magacaabo USGS , qeybteeda la macaamisha qaraxa buuraha ama foolkaanooyinka ayaa ku qasbanaatay in ay ka jawaabto su'aal la yaab leh oo uu bartiisa Twitter-ka kusoo weeydiiyay qof muwaadin ah.
Nin lagu magacaabo Jay Fuur oo ku sugan Richmond ayaa laanta weeydiiyay in ay habboontahay ama badbaado wanaagsan ay tahay haddii uu nacnac kashaato uu ku dul karsado holaca foolkaanaha, isaga oo isticmaalaya ul dheer.
Jawaabta la siiyay iyo warbixintan oo faahfaahsan kaga bogo lifaaqan
Posted at 9:05 30 May 20189:05 30 May 2018
Saddex nin oo lagu helay in ay ka tirsan yihiin Al Shabaab isla markaasna huteel weerareen ayaa lagu xukumay dil toogasho ah.
Maxkamadda Darajada Koobaad ee Ciidmmada Soomaaliy ayaana xukunkaasi ridday maanta.
Saddexda nin ayaa lagu helay in ay ku luglahaayeen weerarkii lagu qaaday Huteel Naaso Habloob Labo 28 bishii Oktoobar ee 2017, sida ay ku warrantay warbaahinta dawladda Soomaaliya.
Weerarkaas waxaa ku nafwaayay ugu yaraan 18 ruux waxaana ku dhaawacmay in kabadan 40 ruux oo kale.
Posted at 8:39 30 May 20188:39 30 May 2018
Ugu yaraan soddon iyo saddex ruux ayaa ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay dalka Eritrea.
Gaariga ayaa ka duulay buurta wuxuuna is gadgadiyay ugu yaraab boqol mitir.
Shilkan ayaa ka dhacay Isniintii waddo ku taalla Shindwa oo konton kiiloo mitir dhanka Waqooyi ka xigta magaalada Asmara.
Posted at 8:11 30 May 20188:11 30 May 2018
Qaar ka mid ah ardayda uu imtixaanka qaranku uga billawdaw magaalada JigjigaImage caption: Qaar ka mid ah ardayda uu imtixaanka qaranku uga billawdaw magaalada Jigjiga
Posted at 7:59 30 May 20187:59 30 May 2018
Ruushka oo lagu eedeeyay saxafiga Ukraine lagu dilay
Arkady Babchenko oo ka mid ahaa saxafiyiinta ugu cadcad Ruushka isla markaasna aad u dhaliili jiray madaxweyne Putin ayaa toogasho lagu dilay isaga oo ku sugan gurigiisa oo ku yaalla dalka Ukraine.
Ra’iisulwasaaraha Ukraine Volodymyr Groysman ayaa Ruushka ku eedeeyay in uu dilkaas ka dambeeyay.
Booliisku waxay sheegeen in ay rumaysan yihiin in loo bartilmaameedsaday xirfaddiisa saxafinimo.
Arkady ayaa u baxsaday magaalada Kiev isaga oo naftiisa u baqayay.
Babchenko oo ka warramaya mudaaharaad ka dhacay Kiev 2014kiiImage caption: Babchenko oo ka warramaya mudaaharaad ka dhacay Kiev 2014kii
Posted at 7:50 30 May 20187:50 30 May 2018
40 jirkan u dhashay Boortaqiiska waxaan aad u doonaya milkiilaha Everton, Farhad Moshiri. Sam Allardyce oo lix bilood tababare u ahaa kooxdaasi ayaa xilka laga qaaday dhammaadkii xilli ciyaareedkii tegay.
Dhanka kale kooxda Manchester United ayaa xoogga saaraysa sidii ay ula soo wareegi lahayd daafaca da'da yar ee Porto, Diogo Dalot.
Warkan oo intan ka faahfaahsan lifaaqan kaga bogo
Posted at 7:43 30 May 20187:43 30 May 2018
Nin laga diiday in indho sircaad dhaawacday
David Copperfield oo ah nin Maraykan ah oo ku caan baxay indho sircaadda ayaa lagu helay in uu tacadi sameeyay balse uusan dhaqaale ahaan masuul uga ahayn nin Ingiriis ah oo ku dhaawacmay isaga oo indho sircaad samaynaya, sida ay sheegtay xeerbeegti.
Xeerbeegtidan oo dacwadda ku qaaday Nevada ayaa sheegay in Gavin Cox uu isagu dhaawaca isu gaystay intii uu socday indho sircaad caan noqotay oo ka dhacday Las Vegas sannadkii 2013kii.
Cox ayaa gudbiyay dacwad ka dhan ah bandhigaas, wuuxuuna sheegay in uu maskaxda iyo meelo kale ay dhaawacyo ka gaareen.
Xukunkaas ayaa ka dhigan in uusan magdhaw iyo dhaqaale kale oo dhaawacyada la xiriira waydiisan karin.
Posted at 6:12 30 May 20186:12 30 May 2018
Maraykanka kulan degdeg ah ka dalbaday Golaha Ammaanka
Dalka Maraykanka ayaa ku baaqay kulan degdeg ah oo uu yeesho golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay si looga wadahadlo hubkii ay dhawaan is waydaarsadeen Israa'iil iyo malayshiyaadka Falastiiniyiinta ah ee ku sugan marinka Qaza.
Maraykanku wuxuu sheegay in loo baahan yahay in gollaha ammaanku uu ka caroodo rabshadaha lagula kacay shacabka Israa'iil, wuxuuna ku adkaystay in lagula xisaabtamo hogaaminta Falastiiniyiinta.
Milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ku dhawaad toddobaatan gantaal lagaga soo ganay Qaza Talaadadii ayna duqaymo dhanka cirka ah kaga jawaabeen kuwaas oo ay ku bartilmaameedsadeen konton iyo shan goobood.
Ururka Xamaas iyo Islaamik Jihaad ayaa qirtay in ay duqeeyeen Israa'iil.
Posted at 6:11 30 May 20186:11 30 May 2018
Jarmalka iyo Turkiga oo wada jir u xusay xasuuqi Solingen
29-ki bisha may 1993-dii ayaa waxay bam gacmeed ku tuureen tageerayasha fikirka Nazi guri ay degganayaeen dad Turki ah oo u dhashay dalka Jarmalka oo ku sugna Solingen, waxaana halkaa ku dhintay laba haween ah iyo 3 gabdhood, 14 qof oo kalana waay ku dhaawacmeen.
Xiriirka labada dal ayaa sii xumaanayey kala duwanaasho dhinaca xuquuqda aadanaha oo soo kala dhex galay labada dal iyo Jarmalka oo is-hortaagay in ay codkooda dhiibtaan dad turki ah oo deggan Jarmalka.
Posted at 6:10 30 May 20186:10 30 May 2018
Waxaa maanta oo Arbaca ah dhammaan dalka Itoobiya ka bilawday imtixaanka tobnaadka, kaasi oo sannad walba xiligan oo kale ka qabsoomo dalkaasi.
Dhanka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya waxaa imtixaanka u fariisan doona arday ku dhaw labaatan kun sida uu sheegay wasiirka waxbarashada ee Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya Ibraahim Aadan Mahad.
Warkan iyo kuwo kalbe ka dhagayso lifaaqan
Ibraahim Aadan MahadImage caption: Ibraahim Aadan Mahad